Burcadbada oo madaxfurasho malaayiin Dollar ah kusii daayay markab ay haysteen – SBC
Burcadbada oo madaxfurasho malaayiin Dollar ah kusii daayay markab ay haysteen
Posted by editor on Apriil 13, 2011 Comments
Burcadbadeed Soomaaliyeed ayaa kusii daayay 5-milyan oo Dollar markab laga leeyahay dalka Thailand oo lagu magacaabo Thor Nexus iyo shaqaalihiisii oo ay afduub ku qabsadeen bishii 25-kii Disember 2010.
Markabkan oo ahaa nooca xamuulka qaada ayay burcadbadeedda Soomaailyeed ka qabsadeen xeebaha dalka Cummaan, kaasoo ay la socdeen 27 shaqaale ah oo u dhashay dalka Thailand isagoo kusii socda dalka Pakistan.
“Waxaan ka qaadannay 5-milyan oo Dollar aroortii hore ee shalay, waana sii daynay,” ayuu yiri mid ka mid ah kooxaha burcadbadeedda ah oo Reuters kula hadlay khadka taleefoonka.
Burcadbadeedda ayaa sii daayay markabka Talaadadii shalay, iyagoo sheegay inuu gaaray goobaha ay badweynta Hindiya kaga sugan yihiin ciidamada caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeedda.
Madaxa hay’adda gargaarka badmaaxiinta bariga Afrika Andrew Mwangura ayaa u xaqiijiyay saxaafadda in la sii-daayay markabka, isagoo sheegay in shaqaalaha la socda ay dhammaantood caafimaad qabaan.
“Waxaa markabka lasii daayay shalay wuxuuna kusoo wajahan yahay Mombassa iyadoo la filayo inuu kusoo gaaro afar illaa shan maalmood,” ayuu yiri Mwangura. “Lacagta madaxfurashada ah ayaa waxaa burcadbadeedda loogu daadiyay markabka dushiisa.”
Kooxaha burcadbadeedda Soomaalida ah ayaa waxay ku haystaan xeebaha dalka Soomaaliya in ku dhow 30-markab iyo shaqaalihii la socday, kuwaasoo horay uga dalbadeen malaayiin Dollar oo madaxfurasho ah.